Alto's Adventure: Mweya weGomo Iye zvino Wave Kuwanikwa paApple Arcade | Nhau dze iPhone
Apple Arcade inopfuurira kuwedzera kwayo zvishoma nezvishoma. Kunyangwe nekubudirira kushoma, Apple inoramba ine chokwadi chekupa iyi kunyorera sevhisi yayo yekuwana nayo inodarika mitambo ye200. Nekudaro, mumwedzi ichangopfuura, mazita atanga kudzikira uye hapana zvitsva zvinonakidza zvekubhadhara kunyoreswa. Iyo itsva yekuwedzera ndiyo mutambo "Alto's Adventure: Mweya weMakomo" kubva kune anozivikanwa mugadziri Snowman uye kubva kune mimwe mitambo seGuta Rakarasika. Pachiitiko ichi, Mweya weMakomo mutambo wakadzokororwa yepakutanga iyo yakaona chiedza muna 2015.
Iwo Mweya weMakomo, mutambo mutsva weAlto's Adventure paApple Arcade
Join Alto neshamwari dzake pane isingaperi odyssey pa snowboard yake. Ziva makomo anoyevedza emakomo ekumusha kwavo, misha yavo midiki inorota, masango ekare uye matongo akasiiwa ekare paunobatana navo pakutsvaga kwavo kweMweya weGomo.
Munzira, iwe uchanunura llamas akatiza, kubhururuka nepamusoro pematenga edzimba, kusvetuka pamusoro pemakoronga anotyisa, uye kukunda vakuru vemusha, zvese izvi uchishingairira zvinhu zvinogara zvichichinja uye kutsvaga zvakavanzika zvakavigwa mukati memakomo.
Developer Snowman asarudza rangarira mutambo wavo unozivikanwa "The Spirit of the Mountains" iyo yakabudiswa muna 2015. Uyu mutambo mutsva unosunungurwa mukati meApple Arcade kubhadhara uye neizvi inotarisira kumutsiridza mutambo une zvinopfuura 4,5 pfungwa kubva pa5 mumusoro wepakutanga. Pakati pezvitsva zvemutambo uyu tinowana:
Fluid, yakashongedzwa uye inonakidza fizikisi-yakavakirwa Gameplay
Maitiro akagadzirwa enzvimbo anoenderana neicho chaichoboardboard
Kuvhenekera kwakazara uye nemamiriro ekunze, kusanganisira muraraungu, chando uye mabhanan'ana, mhute, nyeredzi dzinopfura, nezvimwe.
Bhatani rekubiridzira system, zviri nyore kudzidza asi zvakaoma kudzidza
Makosi akasiyana siyana ekuwedzera mamaki nekumhanyisa
Uyewo, Alto's Adventure: Mweya weMakomo inobatanidza neGame Center kupikisa shamwari dzedu kuti dzitore akanakisa combos uye zvibodzwa zvepamusoro. Naizvo kurudzira kushandisa mahedhifoni kunakidzwa nemimhanzi yepakutanga inonyudza. Pakupedzisira, mutambo wepasirese une iCloud rutsigiro Inoenderana nezvose zviri zviviri iPhone uye iPad.
Kuti uiwane iwe unongofanirwa kuve nekunyorera kunoshanda kuApple Arcade kwe4,99 euros pamwedzi kana kuburikidza nekunyoreswa neApple One.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Alto's Adventure: Mweya weGomo Iye zvino Wave kuwanikwa paApple Arcade
Iyo iPhone 14 Pro kamera ichave yakakora kana ichiita 48 megapixels
EU inoda kuti mameseji ayamburwe pakati peese mameseji mameseji